DEG DEG + DAAWO VIDEO: Feysal Cali Waraabe oo waxba u reeban Muuse Biixi‚ ‘‘Meel khatar ah ayuu dalka maanta ka laad-laadaa‘‘! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG + DAAWO VIDEO: Feysal Cali Waraabe oo waxba u reeban...
DEG DEG + DAAWO VIDEO: Feysal Cali Waraabe oo waxba u reeban Muuse Biixi‚ ‘‘Meel khatar ah ayuu dalka maanta ka laad-laadaa‘‘!
Hargeysa (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Xisbiga UCID Feysal Cali Waraabe ayaa Khamiistii maanta si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Hargeysa, wuxuuna ka hadlay arrimo xasaasi ah oo kala duwan.
Mr. Waraabe ayaa sheegay in aysan ka qayb geli doonin gudi doorasho oo ku Jiro Cabdirashiid Riyo Raac, kaasi oo dood xoogan dhaliyey.
“Laba Sanno oo Muuse Biixi Joogay wax ka dhaca mooyaane, wax u kordha ma Jirin Somaliland, Wax badan ayaanu tanaasul samaynay, Muuse wuxuu taagan yahay Labadii dumarka ee isku qabsaday ilmaha yar aa mid ay tidhi noo kala jar.”. Ayuu yiri Feysal waraabe.
Wuxuu kaloo hadalkiisa raaciyay Feysal Cali Waraabe, “Aafo Qaran ayaa dhacday, Sida lagu sii eegi maayo Somaliland, Wadatashi ayaanu geli doonaa, Meel khatar ah ayuu dalku maanta ka laad-laadaa”.
HALKA HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA FEYSAL CALI WARAABE:
DAAWO VIDEO: Xildhibaan Fowsiya Yuusuf oo si aan laga fileyn uga hashay hanjabaadii Sheekh Shariif
SAWIRRO: Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo heshiis cusub gaaray & qodobbo xasaasi ah oo la isla meel dhigay!
DAAWO SAWIRRO: Madaxweynaha Puntland oo kulan xasaasi ah qasriga madaxtooyada kula yeeshay guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka
XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Villa Soomaaliya diyaarineyso ciidan lagu burburinayo Jubbaland?
Golaha Wasiirrada Somaliya oo maanta Ansixiyay siyaasadda qaran ee Qaxootiga soo guryo-noqonaya
Guddoomiye Maxamed Mursal: ”Doorashada Soomaaliya waqtigeeda ayay ku dhaceysaa”!
DAAWO VIDEO: Guddoomiye Cirro: ‘‘Muuse Biixi Somaliland xoog kumuusan qabsan, kumana sii haysan karo‘‘!
Feysal Cali Waraabe oo weeraray Muuse Biixi
Somaliland khatar ayay ku jirtaa